मासु खान छाड्नुस, यी ६ फाइदा तत्कालै पाउनुहुनेछ - IAUA
ramkrishna October 21, 2017	मासु खान छाड्नुसयी ६ फाइदा तत्कालै पाउनुहुनेछ
अध्ययन अनुसार एक ग्राम एनिमल प्रोटिन उत्पादन गर्न एक ग्राम वनस्पती प्रोटिन उत्पादन गर्नभन्दा १२ गुणा बढि जमिन, १३ गुणा बढि इन्धन तथा १५ गुणा बढि पानी चाहिन्छ । कुने मानिस मानिस मांशाहारीबाट शाकाहारी बन्ने हो भने उसले गर्ने कार्वन उत्सर्जन ५० प्रतिशतले घट्दछ । त्यसैले मासु खान छाड्दा जलवायु परिवर्तन, वनविनाश, प्रदुषण तथा श्रोतको अत्यधिक दोहन जस्ता नकारात्मक असरलाई कम गर्न सकिन्छ । onlinekhabar
Previous Previous post: यस्तो भएमा समाप्त हुन्छ त पृथ्वीमा जीवन ! कुन ग्रहमा छ जीवनको सम्भावना ?
Next Next post: कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो ? यसले कसरि असर गर्छ ? अवस्य जान्नुहोस